कति होला त ग्रीन लाइफको ओपनिङ्ग रेन्ज ? यस्तो छ बिश्लेषण ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
कति होला त ग्रीन लाइफको ओपनिङ्ग रेन्ज ? यस्तो छ बिश्लेषण !
चैत्र २, काठमाण्डौ । ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको शेयर डिम्याटमा आएको छ । बिहिबारबाट सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले कम्पनीको शेयर डिम्याट खातामा पठाउन थालेको हो । सिडिएससीले कम्पनीको शेयरलाई जिएलएच कारोबार संकेतमा मेरो शेयरमा पठाएको छ । नेप्सेले कम्पनीको शेयर शुक्रबार सूचिकृत गरेको छ । आज शेयर नेप्सेमा सूचीकृत संगै आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिनेछ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ९९ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । नेप्सेले नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ्ग रेञ्ज तोक्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार न्यूनतम ९९ रुपैयाँदेखि २९८ रुपैयाँसम्म पहिलो कारोबार खुल्न सक्ने देखिन्छ ।
संसारको पूँजी बजारलाई नियालेर हेर्ने हो भने नेपालको शेयर बजार एकदमै सानो लाग्न सक्छ तर आफ्नो थोरै आम्दानीलाई सानो लगानीबाट सुरु गर्ने लगानीकर्ताहरुको लागि भने यहि बजार नै फेरी संसार बन्न पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डले शेयर बजार सबैको पहुँचमा पुगोस भनेर न्यूनतम १० कित्ते निती ल्याएको थियो, जुन बुक बिल्डिङ्ग विधि बाहेकको आईपीओमा हालसम्म पनि यथावत नै रहेको छ । यहि निती व्यवस्थाले गर्दा पनि नेपाली शेयर बजारमा धेरै आकर्षित हुँदै गएका छन् ।
१० कित्ते नितीले ठूला लगानीकर्ताहरुलाई असर गरेतापनि भएका धेरै साना लगानीकर्ताको लगानी गर्ने बानीमा भने दिन दुई गुणा रात चौगुणाको दरले विकास गरिरहेको छ । आकर्षणको अर्को पक्ष कागजी व्यवस्थाको अन्त्यसँगै सुरुवात भएको डिजिटल कारोबार व्यवस्था पनि हो । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ अनि सुन्दा पनि कुनै दन्तेकथा वा मनगढन्ते कहानी सुनाए झैँ लाग्न सक्छ तर सत्य सत्य नै हुन्छ । कुरा के हो भने नेपाल पुर्नबिमा कम्पनीको आईपीओ खुल्नुभन्दा अघिसम्म नेपालमा डिम्याट अकाउन्टका मालिकहरु लगभग चार लाखको हाराहारीमा मात्र थिए भने डिम्याट हुनेजति सबैले आईपिओ पनि भर्दैनथे । यो तथ्यांक कुनै दशकअघिको नभएर गतबर्ष चैततिरको हो ।
त्यतिबेला शेयर बजारको बारेमा धेरैलाई ज्ञान नै थिएन अनि प्रायः जानकारहरु पनि शेयर बजारलाई भ्रमको खेति हो भन्न पछि पर्दैनथे । तर झण्डै एकबर्षको अन्तरालमा शेयर बजारका अनविज्ञ र ति अल्पविज्ञ आलोचकहरुलाई पनि शेयर बजारले आफ्नो पक्षकै पोल्टोमा पार्दै गएको छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा डिम्याट खाता खोल्नेहरुको संख्या ३१ लाख नाघिसकेको छ । एकबर्षको अन्तरालमा शेयर बजारमा झण्डै २७ लाख नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश हुनु निकै अचम्मको कुरा हो ।
लगानी गर्न चाहानेहरूलाइ खुशीको खबर, किसान लघुवित्तको १३ लाख कित्ता शेयर बिक्रीमा !